Caalaa Ebbisaa Innooroo Magaalaa daa’imman mootummaan Abiy humnaan gara dirree waraanaatti ergaa jiru keessaa tokko. – Kichuu
Caalaan amma umuriin isaa ganna 16 keessa jira; Awadaay keessatti bara 1997 ALH (2005) dhalate.
Abbaan isaa Mootummaan Waggaa Shaniif hidhee dararaa erga ture booda miidhaa sanaan bara 1998alh(2006) addunyya kana irraa boqote.
Haati isaas waan ittiin guddiftu dhabdee rakkachaa turte. Booda keessa haadha ishee magaalaa Laangee jiraatan biratti dhiifte biyyaa baate; achiin booda Hargeessaa jiraachuu ishee malee amma eessa akka jirtu hin beekamu.
Caalaa Harargee Bahaa magaalaa Harawacaa keessa adaadaa isa bira taa’ee ituu barachaa jiruu maatii abbaa isaatii iyyaafatee gara Godina Qellem wallagaa Aanaa daalle sadii ganda Immoo deemuun barumsa isaa kutaa 8ffaa barachaa jira.
Ganna kana manni barumsaa cufaa waan tureef eessuma isaa bira magaalaa Haroo Sabbuu deeme. Otuu achi jiruu itti gaafatamaan Bulchiinsaa fi Nageenya aanaa Daalle Sadii namni Ashannaafii Duulaa Guyyaa jedhamu humnaan ukkaamsee leenjii waraanaa deemee dirree waraanaa akka deemu godhe.
Maatiin gaafachuuf yeroo deemanitti fedhii isaatiin deeme dubbisuu hindandeessan jedhee mucaa umuriin isaa ganna 16 lolaaf ergee jira.
Akkaataa seera addunyaa ittophiyaan mallateessiteetti daa’ima wagga 18 gadii waraanaaf bobbaasuun yakka. Ijoollees maatii dhoksanii loltu waraanaaf qopheessuun akka mootummaattis “hogganaa” aanaa Sanaa kan yakkaan gaafachiisu waan ta’eef falmitoonni mirga dhala namaatiif falman hundi akka beekanii gocha mootummaan Itoophiyaa raawwatu akka saaxilan maatiin gaafatanii jiru.
Godina Addaa Naannawaa Finfinnee Bulchiinsa Magaalaa Buraayyuutti,
Bulchiisi Magaalaa Dirree Dawaa Bulchaa Magaalaa Haarawaa Filate
Bulchiisi Magaalaa Dirree Dawaa Bulchaa Magaalaa Haarawaa Filate WAASHINGITAN, DIISII — (voaafaanoromoo)---Bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa…
Magaalaa Dirree Dhawaa yeroo jollummaa kiyyaattin waggaa 20’m dura mataan kiyya biyya san keeyissattin guddadhee,…
Dirree Dhawa- Kun simannaa ABO magaalaa Dirree Dhawaatti guyyaa har'aa gaggeeffame.
Dirree Dhawa- Kun simannaa ABO magaalaa Dirree Dhawaatti guyyaa har'aa gaggeeffame. Simannaa ABO- #DirreeDhawaa, Oromia Simannaa…